Repoblika Dominikana: nandresy tamin’ny Carribean Series ny Leones · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2010 14:09 GMT
Taorian’ny “baseball” fanao rehefa andro ririnina any amin’ny Repoblika Dominikana, izay nahitana ireo tarika roa lehibe mahazatra tsy tafita ho amin'ny lalao famaranana, ny Aguilas Cibaeñas (Cibao Eagles) sy ny Tigres de Licey (Licey Tigers), dia ny Leones del Escogido (Lion'ny Voafidy) no naka ny toeran'izy ireo, ekipa iray mpanao baseball izay nandrombaka ny amboara ny taona 1992, nandresy tamin'ny fifanintsanana anatiny ary nahazo ny toerana tamin’ny Caribbean Series. Nampiditra fiovana lehibe ara-pitantanana sy ara-drafitra ho an'ny taom-pilalaovana 2009-2010 ny Loenes avy ao Santo Domingo ary dia nahitam-bokatra izany. Mamintina izany fandresena izany i José Francisco Arias ao amin'ny blog Cristal y Colores [es] :
Ela ny ela ka azon'ny Escogido Lions ihany ny fandresena tamin’ny fiadiana izay ho tompondaka'ny Repoblika Dominikana ao amin'ny Ligin'ny Baseball ho an'ny matihanina! Tamin'io alina io ry zareo dia nandresy ny Cibao Giants tamin'ny isa 5 noho 2 tao amin'ny Kianja Julián Javier ao San Francisco de Macorís ary nitondra nody ny amboara. Efa ho 18 taona lasa izao no nahazoany amboara farany. Nanomboka ny alin'iny ny fankalazana ary haharitra andro maromaro. Ireo mponin'i Escogido dia efa niandry mafy io fankalazana ny fisalorana amboara goavana io.
Tsy vitan'ny hoe ny fandresena tamin’ny fifaninanana tao an-toerana ihany no azon’ny Escogido, fa koa nahazo ny laharana voalohany tamin’ny 2010 Caribbean Series izy, izay natao tany amin'ny nosy Margarita any Venezuela ny 2 hatramin'ny 7 Febroary. Tamin'ny nandreseny ny Leones de Caracas (Lion'ny Caracas) 7-4, lalao iray ihany no nahalavo ny Escogidoo nandritra ny fifaninanana. Naneho ny fihetseham-pony ao amin'ny Twitter i Felivia Mejía (@LaBari) :
Niverina hitondra fandresena goavam-be indray ny The Escogido. Arahaba nahazo fandresena tamin'ny Carribbean Series. Manodidina azy, ravo avokoa ireo mpankafy azy!!
Noho io fandresena azon’ny Escogido io, 18 ny anaram-boninahitra azon'ny Repoblika Dominikana tamin'ny Caribbean Series, ary io no firenena nahazo anaram-boninahitra betsaka indrindra tamin’ny tantaran’ny zava-nitranga rehetra, ka nandray anjara matetika tamin'izany Mexico, Venezuela, Puerto Rico niaraka tsy tapaka tamin’i Panama sy Cuba izay nandray anjara koa fahiny.
Sarin’ny kianja fanaovana baseball any amin'ny Repoblika Dominikana, nalain'iEl Marto ary ampiasàna ny Creative Commons license.
Ny fandraisan’anjaran’i Escogido tamin'ny Caribbean Series no nandrodana ny fanjakazakana nataon’ny ekipa sasany toa ny Tigres de Licey sy ny Aguilas Cibaeñas teo an-toerana sy tany amin'ny faritra. Nanomboka ny taona 1992 hatramin’ny taona 2009, nitondra nody anaram-boninahitra 9 ny Repoblika Dominikana tamin’ny Caribbean Series, 5 tamin’ireo avy amin’ny Eagles, ary ny 4 hafa avy amin’ny Tigers. Miaraka amin'ny fisondrotan’i Escogido, nitombo bebe kokoa ny fifantohan-tsaina sy ny risika hifaninana amin'ny baseball fanao amin'ny andro ririnina any amin'ny Repoblika Dominikana, ka tsy voatery ho tafakatra ambony foana ny ekipa iray, toy ny nitranga taon-dasa vitsy izay. Raha mandinika ny fandehan'ity raharaha ity. Mankalaza i Mario Peguero (@mariopeguero) :
Ny tena tsara indrindra tamin’ireo rehetra ireo dia ny Lions of Escogido nandresy tamin'ny Caribbean series omaly ! Vanim-potoana vaovao indray no manomboka!!!